WTM Africa Manendry ny lohateny vaovao ho an'ny fizahantany sy fizahantany any Afrika
Home » Lahatsoratra farany farany » Awards » WTM Africa Manendry ny lohateny vaovao ho an'ny fizahantany sy fizahantany any Afrika
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism
Loka WTM Africa
Ny WTM Africa dia faly manambara fa ny orinasan-dàlana miaina fanandramana mihaja ary iBeyond no mpandresy tamin'ny Reigniting Africa Travel & Tourism Awards. Ny hazakazaka dia ny Cape Nature, raha nahazo anarana malaza kosa ny The Art of Penguin Conservation.
ary iBeyond dia mandray ny loka Reigniting Africa Travel & Tourism Award miaraka amin'ny fanentanana WILDwatch manome aingam-panahy.
Ny sokajy "Reigniting Africa" ​​ao amin'ny World Travel Market Africa dia manaiky ny fampielezan-kevitra farany misy vokany be indrindra amin'ny tantara sy mitondra vokany tsara.
Ny fampielezan-kevitra dia nahita streaming mivantana indroa isan'andro isan'andro tamina safari virtoaly adiny telo mba hitazomana an'i Afrika ho velona ao an-tsaina sy ao am-pon'ny mpandeha.
ary iBeyond dia nahazo ny loka tamin'ny fanentanana WILDwatch Live Safaris nanentana ny fanahy, izay natsangana nandritra ny areti-mandringana COVID niarahana tamin'ireo manam-pahaizana momba ny fampielezana bibidia WildEarth. Ny fampielezan-kevitra dia nahita andBeyond mivantana mivantana indroa isan'andro, safari virtoaly adiny telo maharitra mba hitazomana an'i Afrika ho velona ao an-tsaina sy ao am-pon'ny mpandeha manerana an'izao tontolo izao. ary ny mpitarika Beyond dia nomena fahefana sy nampiofanina hizara ny fitiavany ny fiainana dia sy ny fiarovana azy ireo amin'ny fakantsary.
“Tamin'ny alàlan'ny Reigniting Africa Awards, WTM Africa dia nitady fatratra ny fampielezankevitra mpanjifa na fifanakalozana tantara marina sy mamorona izay nitondra an'i Afrika ho velona nandritra ny fotoana sarotra COVID-19. ary ny WILDwatch Live Safaris an'iBeyond dia nandidy ny boaty rehetra ary nampifaly ny mpitsara. Novonoina tamin'ny fomba kanto ny fampielezan-kevitra tamin'ny alàlan'ny karazana atiny isan-karazany ary tena nitahiry ny fitiavana ny Safari sy ny fiarovana azy ireo. Voaporofo koa fa fomba tsy mampino hanangonam-bola ilaina amin'ny fandraisana andraikitra mendrika izany, "hoy izy Megan Oberholzer, Tale Portfolio: Travel, fizahan-tany ary indostria famoronana ao amin'ny RX Africa (Reed Exhibitions).
Cape Nature dia mpifaninana mendrika amin'ny fampielezan-kevitra #Nature Staycation izay nandrisika ireo mpandeha eo an-toerana hijery ny fireneny. Ny fanentanana dia nanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny fialantsasatra maharitra sy maharitra.
"Tian'ireo mpitsara tanteraka ny foto-kevitra #Nature Staycation. Tamin'ny fotoana nahatsapan'ny mpandeha sanganasa sy sanganehana momba ny safidy sy ny fialantsasatra fialantsasatra, ity fanentanana ity dia nanatsotra ny dia ary nahatonga ny fizotrany hahatsapa ho azo antoka sy azo antoka. Nanentana ny fahatokisana izany ary nanoritra mazava tsara ny fahafaha-manao ho an'ny mpandeha, "hoy i Oberholzer.
Ny Art of Conservation dia nahazo fanamarihana mendri-kaja tsy ny lanjan'ny fiarovana azy io ihany fa ny zava-misy fa nifantoka tamin'ny fianakaviana sy ny ankizy ny fanentanana ary namorona ambasadaoro vaovao ho an'i Afrika Atsimo ho toeran-kaleha.
Ny fanentanana Art of Penguin Conservation, noforonin'i Jon Monsoon iarahana amin'ny traikefa virtoaly Airbnb, dia nanome fanazavana sy fampahalalana momba an'i Cape Town sy ireo penguin afrikana tandindomin-doza amin'ny alàlan'ny fampiantranoana webinar mivantana sy mivantana. Nanolotra hetsika an-tserasera, fanabeazana momba ny tontolo iainana ary kilasy kanto mety amin'ny sokajin-taona rehetra ao an-trano mandritra ny fanidiana.
“Nanaitra ny mpitsara tokoa ny kalitaon'ny fandefasana rehetra nahazo an'ity sokajy loka vaovao sy mahaliana ity. Tena vavolom-belona izy ireo momba ny fientanam-po, ny fanoloran-tena ary ny faharetan'ny indostria mampino antsika, ”hoy i Oberholzer namarana.
Tsenan'ny dia an'izao tontolo izao (WTM) Portfolio dia misy hetsika fivezivezena mitarika, vavahady an-tserasera ary sehatra virtoaly manerana ny kaontinanta efatra, izay miteraka 7.5 miliara dolara amin'ny fifanarahana indostrialy. Ireto ny hetsika:
WTM Africa natomboka tamin'ny 2014 tany Cape Town, Afrika Atsimo. Maherin'ny 6,000 ireo matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany manatrika ny tsenan'ny fizahan-tany miditra sy ivelany ary ny fizahantany fizahan-tany. WTM Africa dia manolotra fifangaroana voaporofo mpividy mpampiantrano, haino aman-jery, fanendrena efa voatendry mialoha, tambajotra eo an-toerana, fampisehoana hariva ary mpitsidika fivarotana fitsangatsangana.
Hetsika manaraka: Alatsinainy 11 aprily hatramin'ny alarobia 13 aprily 2022 - Ivon-toeran'ny Fifanarahana Iraisam-pirenena any Cape Town, Cape Town
eTurboNews dia mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery ho an'ny WTM Africa.